Tomato "Orange Russian 117": tomato nwere uto magburu onwe ya - Akwukwo nri - 2020
Mara mma ma na-atọ ụtọ tomato - tomato "Orange Russian 117"
Ndị na-azụlite n'Ebe Ọdịda Anyanwụ adịghị emepụta iche, nke ha na-enye aha ndị metụtara mba ụfọdụ. Oroma Orange - nani osisi a. A tomato nwere ikike a na-enwetụbeghị ụdị ya na mkpụrụ osisi ndị na-eju anya na agba bịara n'ahịa ndị Russia si na USA.
O nwere ike inweta ọtụtụ narị Fans, ebe ọ na-ejikọta àgwà ndị a na-achọ mma na mkpụrụ osisi. Ị nwere ike ịgụkwu banyere ya na isiokwu anyị. N'ime ya, ị ga-achọta ọ bụghị naanị nkọwa zuru ezu nke ụdị dịgasị iche iche, kamakwa ị ga-amata ọdịdị na njirimara ya.
Tomato "Orange Russian 117": nkọwa nke dịgasị iche iche
Aha akara Oroma Russian
Nkọwa zuru ezu Oge etiti oge indeterminantny ọkwa
Onye malitere USA
Na-agba Ụbọchị 105-110
Ụdị Ụdị obi
Agba Osimiri odo na-acha uhie uhie
Nkezi usoro uka tomato 280 grams
Kwe iche 4.5 n'arọ site na ohia
Atụmatụ nke na-eto eto E guzobere bushes dị mkpa
Ọrịa ọrịa A chọrọ ihe nchedo
Tomato "Oroma Russian" ("Orange Russian 117", "Orange Russian 117") - oge dịgasị iche iche nke oge dị iche iche na ụdị ntinye nke ndị na-adịghị mma. A na-ekpuchi osisi ndị dị ike nke osisi ahụ na akwukwo ahihia ndị dị mma, n'ihi nke ohia na-ekiri ihe omume. Ọ naghị etolite, kama ọ na - eto ihe karịrị 150 cm n'ịdị elu.
Kwesịrị ekwesị maka ịkụ na greenhouses na oghe ala. Ọrịa ọrịa bụ nkezi. Ụdị mkpụrụ osisi ahụ bụ ụdị obi, nke buru ibu. Onu ogugu nke tomato chara acha bu 280 g. Mkpụrụ nke tomato sitere na kpochapụwo abụọ agba.
A na-eji tomato na-acha odo odo nke tomato "Russian" kpuchie ya na -acha uhie uhie uhie, a na-esekwa ọnụ ya na ụcha mkpụrụ osisi bara ụba. N'ime n'ime ya bụkwa nke agba aja na-achaghị acha: "àkwá" na-acha uhie uhie bụ nke a na-ahụ anya na oké oroma pulp. Mkpụrụ osisi dị warara, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkụ, na obere ọnụ ọgụgụ obere mkpụrụ. Ọnụ ọgụgụ ha na otu mkpụrụ anaghị agafe 6 iberibe.
Tomato na steeti nhazi ụzụ kwadoro njem nke ọma.. Echekwa ya n'ime friji maka ihe karịrị ụbọchị 45.
Oroma Russian 280 grams
Ọrụ ebube Balcony 60 grams
Maryina Roshcha 145-200 grams
Nnukwu ude 70-90 grams
Pink meaty 350 grams
Eze n'oge 150-250 grams
Mmanụ aṅụ Mmanụ aṅụ 60-70
Ihe dị iche iche na-eri nri na USA site n'aka onye ọrụ ugbo Jeff Dawson. Na Russia debara aha na 2010. Ụdị dịgasị iche iche dị mma maka ịkọ ihe na mpaghara ndịda nke Russia, mpaghara Nonchernozem na mpaghara Moscow. N'okpuru ụlọ griinụ, ọ nwere ike toro na Siberia na Urals.
Mkpụrụ nke "Pink Orange" dị mma maka ịme nri na ihe ọṅụṅụ, nakwa maka iji ya eme ihe maka ụmụaka na nri.
Na ohia ọ bụla, na idebe ụkpụrụ nke agrotechnology na-enweta ọ dịkarịa ala 3 n'arọ nke tomato azụmahịa. Mgbe etolite na griin haus, mkpụrụ na-abawanye ruo 4.5 kilo. Site na uru dị iche iche dị iche iche, ihe a na-ahụ anya nke mkpụrụ osisi na ihe dị elu ha na-egosi na ha dị mma.
N'ime ezughị okè a nwere ike ịkpọ naanị obere iguzogide ụdị dịgasị iche iche. Ihe kachasị mma nke ụdị dịgasị iche - nchikota nke mkpụrụ osisi. Iji mezuo mkpụrụ, ọ na-atụ aro ka ị ghọọ osisi dị n'ime stalks atọ.
Ị nwere ike iji mkpụrụ nke dị iche iche na ndị ọzọ tụnyere okpokoro:
Oroma Russian 4.5 n'arọ site na ohia
Pink flamingo 2.3-3.5 n'arọ kwa square mita
Tsar Peter 2,5 kg site na ohia
Alpatieva 905A 2 n'arọ site na ohia
F1 kacha mma 19-20 n'arọ kwa square mita
La la fa 20 n'arọ kwa square mita
Ụdị chọrọ 12-13 n'arọ kwa mita square
Obereghi 6-7,5 n'arọ site na ohia
Nikola 8 n'arọ kwa square mita
Demidov 1.5-4.7 n'arọ site na ohia
Anyị na-eme ka uche gị bụrụ ihe ole na ole bara uru banyere ihe gbasara tomato.
Gụchaa ihe gbasara iche iche na iche iche, yana tomato ndị na-eguzogide ọgwụ ndị ọrịa kachasị mma nke nightshade.
Ụdị tomato dị iche iche "Russian Pink" na foto foto:
A na-akụ mkpụrụ osisi tomato "Russian" na seedlings ụbọchị iri anọ na ise tupu oge ebute na ala. Na nke mbụ eburu, a na-atụ aro ka ị tuo ome ahụ. Mgbe ọ kụrụ n'ala, tomato chọrọ garter, na mgbe mmalite nke okooko osisi, ọ dị mkpa ka a kụọ ya.
N'otu oge ahụ na ohia na-ahapụ 2 nzọụkwụ n'okpuru obere akpa nwa ebu n'afọ maka ịmepụta Ome ndị ọzọ. A na-apụkwa ndị ọzọ ka ha na-apụta. Ụdị dịgasị iche iche na-eme nke ọma iji fertiliral na ịnweta nri na-edozi ahụ maka tomato na nri dị ukwuu. Iji zere ichikota osisi ahụ, a na-atụ aro ka ị na-edebe ala hydrated. Osisi Hilling ma ọ bụ akuku akuku na-etinye aka na oke.
Mgbe toro na greenhouses, ndị Orange Russian iche iche wakporo site aphids. Iji kpochapụ ha, jiri ụmụ ahụhụ na-emepụta ọgwụ ndị a ma ama na ụdị ọgwụgwọ ndị dị na mkpịsị ilu na ncha. Mgbe ịchọta osisi emetụta gị, ọ na-atụ aro ka ị wụsa ala na ngwọta nke potassium permanganate ma wepu osisi shrub ahụ. Iji gbochie mmepe nke phytophthora n'oge ịwụ na tomato chara, a na-emeso ihe ọkụkụ ahụ na Bordeaux ma ọ bụ phytosporin.
Tomato "Orange Pink" nwere ike ịghọ ezigbo mma nke ubi na tebụl. Osisi ndị dị elu nke osisi a n'oge ịmalite mkpụrụ osisi na-adọrọ adọrọ mmasị, na-atọ ụtọ nke ndị na-enweta ihe ọkụkụ na-enwe mmasị na ndị hụrụ nri ọhụrụ dị elu.
Viscount Crimson Aja edo Pink Bush F1
Eze mgbịrịgba Titan Flamingo
Katya F1 oghere Openwork
Ɛpo Ezigbo ekele Chio Chio San
Cranberries na sugar Ọrụ ebube nke ahịa Supermodel
Gaa De barao nwa F1 isi